» रिता राउत क्षेत्रीलाई दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायकले किन स्यालुट गरे ?
रिता राउत क्षेत्रीलाई दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायकले किन स्यालुट गरे ?
२५ बैशाख २०७८, शनिबार १५:१८
मकवानपुर, २५ बैशाख । नेपालकै पहिलो दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को नवौँ एपिसोडको प्रोमो सार्वजनिक भएसँगै उत्कृष्ट २४ मा पुगेकी गायिका रिता राउत क्षेत्री चर्चाको शिखरमा छिन् । दोहोरी च्याम्पियनको १२ वटा दोहोरी भिडन्त समूहमध्ये शनिबार रिताको समूहले दोहोरी भिड्दैछ । रिताले दोहोरी भिडन्तमा कस्ता टुक्काहरु प्रयोग गर्नेछन् भनेर पुरा थाहा पाउन शनिबार नै कुर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रोमो सार्वजनिक भएसँगै रिता शो सुरु हुनु अगावै चर्चाको शिखरमा छिन् । रितालाई शोमा निर्णायकहरुले आफुहरुले चाहेको जस्तो दोहोरी च्याम्पियन उनी नै भएको भन्दै स्यालुट समेत गरेको प्रोमो सार्वजनिक भएपछि रिताको चर्चा चुलिएको हो । सार्वजनिक भएको प्रोमो अनुसार रिताले सुरुमा एउटा टुक्का गाउँछिन् । जहाँ रचनाकारलाई पनि कलारका नै हो भनिएको छ । उनको जवाफमा दर्शकहरुको ताली बजेको सुनिन्छ अनि दोहोरी भिडन्तमा रहेका अर्को समूह पनि सोचमग्न देखिएको छ । विशेष अतिथिका रुपमा पुगेका रामजी खाँड र करिश्मा ढकालको मुहारमा पनि मुस्कान देखिन्छ ।
प्रोमोमा अगाडि हेर्ने हो भने रिताको गायकीको प्रशंसा गर्दै निर्णायक प्रजापति पराजुलीले उनलाई स्यालुट गरेका छन् । निर्णायक रमेश बिजीले पनि उनीप्रति आफ्नो मनैदेखि सम्मान जागेको भन्दै आफुले खोजेको जस्तो मनको दोहोरी च्याम्पियन गायिकाको रुपमा रितालाई पाएको बताएका छन् । निर्णायकहरुको प्रशंसामा रिताको आँखामा खुशीको आँशु पनि देखिन्छ ।
आखिर किन निर्णायकहरुले रिताको यति धेरै प्रशंसा गरे त ? पुरा जान्नको लागि भने शनिबारको शो हेर्नैपर्ने हुन्छ । शनिबार दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा पुगेका पन्ध्रौँ जोडी श्याम राणा र बबिता गुरुङसँग दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट २४ मा पुगेका सोह्रौँ जोडी रिता राउत क्षेत्री र सविन आचार्यले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–